Ukususa i-Makeup ngaphandle koSula-awona manyathelo kunye neemveliso IBezzia
Ungasusa njani i-makeup ngaphandle kokusula
USusana godoy | 19/07/2021 10:00 | Ubuhle
Ukususa i-makeup ngaphandle kokusula kunokwenzeka kunye neemveliso esizaziyo. Kuba nangona ziyenye yeendlela ezilula zokuvalelisa kwizithambiso, asizukuhlala sithatha inyathelo elifanelekileyo kulusu lwethu. Ke ngoko, akukho nto ifana nokubheja kwezinye iindlela.
Kuba ukongeza ekuthetheni ngokuthambisa ukwenziwa kwakhona kufuneka sibheje kulusu olusempilweni kwaye ke kubalulekile ukuba silandele amanyathelo afanelekileyo. Siza kufumanisa kungekuphela inye, kodwa uninzi lwala manyathelo okwenza kube lula kuwe ukuba uthi ndlela-ntle kwizithambiso kwaye molo ulusu olukhathalelwe ngakumbi.
1 Susa izithambiso ngaphandle kokusula kodwa ngamanzi amancinci
2 Ukucoca ubisi
3 Yenza i-oyile yokususa
4 Isiponji iKonjac
5 Kutheni ungasusi i-make-up ngeesula
Susa izithambiso ngaphandle kokusula kodwa ngamanzi amancinci
Nangona kukho imveliso elapha ukuze uhlale yiyo amanzi emicellar. Yiyo loo nto uninzi lwethu lushiya ngasemva izisuli kuye. Ukuthungwa kwayo ngohlobo lwamanzi, njengoko igama layo lisitsho, lisusa ukwakheka kwelinye ipasi. Ifanelekile kubo bonke ubuso kodwa namehlo. Ungayisusa ngebhola yomqhaphu kwaye ke wenze inkqubo ikhawuleze kwaye ibelula. Ukongeza ekususeni i-makeup, ikwathambisa, ithoni kwaye iphucule ulusu, ngaphandle kokulibala umphumo wokuthambisa obangela. Kuko konke oku, yenye yeendlela zokubheja eziqinileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo.
Ngelixa amanzi emicellar eboniswe njengotshintsho olupheleleyo, Ukucoca ubisi yenye yezona mveliso zisisiseko kodwa kungabalulekanga kangako. Ukongeza ekucoceni, ihambisa amanzi kakhulu. Ngesi sizathu, ayizukuma kodwa ngokuchaseneyo. Ifanelekile kulusu olomileyo ngesi sizathu, kodwa nolona lubuthathaka. Ukongeza kokubashiya becocekile, iya kuthi kwakhona ibanike olona hlobo luchukumisayo lombulelo kwi-hydration yayo.
Yenza i-oyile yokususa
Nangona mhlawumbi ayisiyiyo enye yeendlela zokuqala ukuqwalasela, kufanelekile ukuba kukhankanywe ioyile zisinika iivithamini ezininzi kwaye, ewe, zininzi ne-hydration ulusu lwethu. Kungenxa yoko le nto ukuyinyamekela ukuya kuthi ga kubuninzi esinokubheja kubo. Ijojoba okanye ioyile yealmond ayinakusilela ekhayeni lethu. Kungenxa yokuba ziyindalo kwaye kuba ngamathontsi nje ambalwa siya kuba sanele. Ukuba unesikhumba esomileyo nabo baya kukulungela.
Ngokuqinisekileyo nawe uyazi ngenxa yokuba iye yaba yenye yezona zinto zibalulekileyo. Kungenxa yoko le nto kufanele ukuba ibekho kwingxowa yakho yokwenza i-makeup. Ewe, uqinisekile ukuba sele uyayazi loo nto inokusetyenziswa kunye nemveliso okanye iyodwa. Esi siponji siphindaphindeka kwaye yiyo loo nto sisithanda kakhulu. Ukuba uyayithambisa, iya kuthamba kwaye umsebenzi wokususa i-makeup uya kuba lula ngakumbi. Ukongeza, kuxhomekeke kuhlobo lolusu onalo, unokukhetha iindlela ezahlukeneyo.
Kutheni ungasusi i-make-up ngeesula
Inyani yile yokuba emva kokubona olu khetho, kusikhokelela ekuthetheni nokususa izithambiso ngaphandle kokusula kunokwenzeka. Inyani yile yokuba ukuba wenza eli nyathelo amaxesha ngamaxesha akukho nto izakwenzeka. Kodwa ukusetyenziswa kwazo ngokuqhubekayo akunakukucoca ulusu lwakho kakuhle nangokucokisekileyo. Intoni iya kubangela ukuba ama-pores agqume kwaye kubonakale iintloko ezimnyama kunye nazo zonke iintlobo zayo. Ngenxa yeekhompawundi zayo zinokukwenza ukuba ulusu lukhangeleke ngathi lome ngakumbi, ngakumbi oko kuye kwabonakala kukungabi namanzi kakuhle kwesikhumba. Ngenxa yoko, kufuneka sinciphise ukusetyenziswa kwayo kangangoko kunokwenzeka kwaye sikhethe iimveliso ezingentla ukongeza ekucoceni ulusu ngamanzi, olusoloko luluhle. Kwaye wena? Ngaba usebenzisa izisusuli zokuthambisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ungasusa njani i-makeup ngaphandle kokusula
Ukutya kwenyanga, yintoni kunye nendlela esebenza ngayo
Yintoni ukuphakanyiswa kweenkophe